UJJ Benítez: umbhali ngemuva kweCaballo de Troya | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | inganekwane yesayensi, Abalobi, Amabhuku
UJJ Benítez ungomunye wezintatheli nabalobi baseSpain abadume kakhulu nabahumusheka kakhulu. Yize ayaziwa cishe kuyo yonke iplanethi evela kwisaga ekhethekile, IThrojani nehhashi, futhi wathuthukisa umsebenzi wobuntatheli ophumelelayo. Ubufakazi balokhu ukuqashelwa komsebenzi wakhe omkhulu nge-2021 Navarra Journalists Award.
Ngakolunye uhlangothi, UBenítez unikele kakhulu empilweni yakhe ukuxazulula izimfihlakalo (ikakhulukazi ehlobene ne-ufology). Eqinisweni, ngasekupheleni kweminyaka yama-70 wanquma ukushiya ubuntatheli bobuchwepheshe ukuze kulimaze uthando lwakhe ngamaUFO. Kuze kube manje, umbhali weNavarrese uthengise amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-15 phakathi kwama-eseyi, amanoveli aqanjiwe, imibhalo yocwaningo nenkondlo.
1 Isaga seTrojan Horse
1.1 IJerusalema (1984)
1.1.1 Ezinye izincwadi ezikuchungechunge lweTrojan Horse
2 Mina, uJules Verne (1988)
3 Ama-UFO ami ayizintandokazi (2001)
4 Inhlekelele Ephuzi (2020)
5.1 Izikhathi zezintatheli
5.3 Izici zezincwadi zikaJJ Benítez
5.4 Uhlu lwamanoveli kaJJ Benítez
7 UJJ Benítez namuhla
Le saga IThrojani nehhashi
Lolu chungechunge lubeka uhambo ngokuhamba kwesikhathi inhloso yakhe ukwazi "impilo yangempela" yomuntu owaziwa kakhulu emlandweni wesintu: uJesu waseNazaretha. Ngokuphikisana okunjalo, impikiswano yayingaphezu kokuqinisekiswa. Ngenxa yalokho, uBenítez wazuza abagxeki abaningi, ikakhulukazi eSontweni LamaKatolika kanye namazwi obuKhristu asadla ngoludala.
Noma kunjalo, akunakuphikwa ukuthi IThrojani nehhashi Kuyaziswa njengezincwadi zakudala eSpain. Impela, kusukela ekushicilelweni kwevolumu yokuqala ngo-1984, uzungu lwayo selukhona emcabangweni weqembu laseSpain. Njengamanje, lesi saga sinabalandeli abaningi emhlabeni jikelele; Ubufakazi balokhu amaqembu amaningi nezinkundla zokuxhumana nabantu.
Qala uhambo oluya kokwedlule; umfundi uyiswa ku-AD 30, ikakhulukazi phakathi kukaMashi 30 no-Ephreli 9. Imicimbi ilandiswa ngezahluko eziyishumi nanye, eyodwa ngosuku. Le ncwadi iphakamisa imibuzo engaphezu kuka-XNUMX nokubonisa (eminye yayo inameva) ngomlingiswa onikelwe ukuzinikela kwakhe ebuKristwini.
EJerusalema. Ihhashi ...
Ezinye izincwadi ezikuchungechunge lweTrojan Horse
Isigaba saseKesariya (1996)
Mina, uJules Verne (1988)
Ngokuphathelene nemithelela yakhe yokubhala, umbhali Pamplona umemezele kaningi ukuthanda kwakhe umsebenzi kaJules Verne. Ngaphezu kwalokho, uBenítez wenza ukuhlaziywa okuningiliziwe kombhali waseFrance nomlobi wemidlalo, okwathi ngaleso sikhathi kwamenza wakwazi ukuba "ngumbonisi."
Ngamazwi kaBenítez, Mina, uJules Verne kuyincwadi ukuthi ihlose ukukhombisa "ubuso obufihliwe" be indoda ebhekwe ngabaningi "Umprofethi wesayensi." Ngaphandle kokungabaza, umbhalo owehluke kakhulu uma uqhathaniswa nanoma imuphi omunye ogxile empilweni, ugqozi nasemsebenzini wombhali waseFrance.
Mina. UJulio Verne
AmaUFO engiwathandayo (2001)
Umthamo wesibili weqoqo Cishe izincwadi zokubhalela eziyimfihlo, eUngumbhalo obaluleke kakhulu wezifo ze-ufologists, ngokusho kochwepheshe kule ndawo ethile yocwaningo. Okuqukethwe kwayo okuhlaba umxhwele -Kubukeka sengathi kubhalelwe izethameli ezisencane- ihlanganisa iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu yocwaningo olwenziwe nguBenítez.
Ngakolunye uhlangothi, le ncwadi inikeza umfundi izithombe ezingaphezu kuka-450, eziyi-110 zazo ezihambisana nemidwebo yombhali. Ngaphezu kwalokho, kuboniswa imifanekiso engashicilelwe (njengomdwebo wabanye osomkhathi abavela eminyakeni engama-29.000 edlule, ngokwesibonelo). Ngokulinganayo, UBenítez usola i-NASA ngokuba yisikhungo esinamanga abuye afake nezimfumbe ezithokozisayo; enye yazo "kungani ungabuyelanga enyangeni?"
Ama-UFO ami ayizintandokazi (I ...
Inhlekelele ephuzi (2020)
Inhlekelele ephuzi yincwadi yakamuva kakhulu yeBenítez, owalungisa wangena emkhunjini ohamba ngesikebhe lapho kuqubuka ubhadane lweCovid-19 eYurophu. Mayelana nencwadi, umbhali wathi: “kungumfanekiso othakazelisa ngokwengqondo labantu, abanye abantu bezizwe ezithile bakholelwa ukuthi baphakeme kunezinye, bakubheka ngendelelo yangempela, kepha babesaba njengathi "...
Ngakolunye uhlangothi, igama "ophuzi" esihlokweni lisho umsuka (ngokunokwenzeka ngokwe-WHO) Igciwane lama-Chinese lokho kuwushintshe kakhulu umqondo "wokujwayelekile" ngekhulu lama-XNUMX. Ngakho-ke, le ncwadi ibonakalisa kahle indlela ukwesaba ukufa okungakhethi ngayo isimo senhlalo noma indawo lapho uvela khona.
Inhlekelele enkulu ...
NgoSepthemba 7, 1946, uJuan José Benítez wazalelwa ePamplona, ​​eSpain. Kusukela ebusheni bakhe wayesebenza emikhakheni ehlobene nokudweba nobumba. Njengoba esho ngokwakhe, wayehlala engumfana othanda ukwazi futhi enentshisekelo yokuthola ukuthi kwenzakalani ngakuye. Hhayi ngeze, Uthathe isinqumo sokufunda i-Information Sciences e-University of Navarra (waphothula izifundo zakhe ngo-1965).
Kunoma ikuphi, isihlakaniphi saseSpain asikaze siphike noma yiluphi udaba, noma ngabe lwalubhekwa njengoluyimpikiswano kangakanani ngombono womphakathi. UBenítez futhi akanandaba kakhulu namazwi abuza ukungabi bikho kobungqabavu besayensi futhi embeka icala lokuthi uqagela ngokweqile. Noma kunjalo, izigidi zabafundi emhlabeni jikelele sezivele zizazi izindlela zakhe zocwaningo.
Ngemuva kokuphothula iziqu e-University of Navarra, UBenítez waqala ukusebenzela iphephandaba ngo-1966 Iqiniso, eMurcia. Yabe isidlula I-Herald kusuka e-Aragon nase IGazethi yaseNyakatho kusuka eBilbao. Emithonjeni eshiwo ngenhla usebenze njengesithunywa esikhethekile ezindaweni ezahlukahlukene eYurophu futhi wahambela umhlaba wonke.
Ngesikhathi sama-1970, intatheli yaseNavarrese wagxila emsebenzini wakhe wobuntatheli obhekise ku-ufology (Okwamanje kuthathwa njengesiphathimandla somhlaba ngalolu daba). Ngokufana, waqeda uphenyo ngeTurin Shroud futhi waqoqa imibhalo evela eSpain Air Force ngokubonwa kweUFO.
Ngo-1979 uBenítez washiya phansi ngokuphelele ubuntatheli obusemthethweni ukuze azinikele ngokuphelele ekuphenyweni ngentshisekelo yakhe. Njengoba izinqubo zenhloso yokufundisa, isihlakaniphi esivela ePamplona saqala ukushicilela iziphetho zemibuzo yaso. Ngakho-ke, Akulona ihaba ukusho ukuthi ucwaningo lumenze waba ngumlobi omkhulu, enezincwadi ezingaphezu kwezingama-60 ezishicilelwe kuze kube manje.
UBenítez usho kaningana ukuthi ukubhala kudinga ukwazi ukuthi ungayixoxa kanjani indaba. Kuleli phuzu, kusobala ukuthi wafunda ukudlulisa uthando lwakhe ngemicimbi eyejwayelekile noma kunzima ukuyiqonda. Ngakho-ke, incwadi yakhe yokuqala yavela: Ama-UFO: i-SOS eya Kubuntu (1975), kwalandelwa izincwadi ezinezinombolo ezinhle zokuthengisa ezifana ne-eseyi Osomkhathi bakaJehova (1980) futhi Izivakashi (1982).
Izici zezincwadi zikaJJ Benítez
KuJJ Benítez, imisebenzi yomcwaningi nombhali ihlanganiswe koyedwa. Le nhlanganisela iholele ku- umsebenzi ofaka izinkondlo, ama-eseyi, ifilosofi namanoveli. Kepha, akugcini ngokusebenziseka kwezinto eziningi kuphela kepha ngevolumu echazayo, ukujula kokuhlaziya nokusingathwa kwesitayela ngokuya ngezidingo zohlobo lwemibhalo olubhekiswe kulo.
Ngakho-ke, umbhali waseSpain ubonakala ekwazi ukukuhlanganisa konke, ngoba ngesikweletu sakhe unenoveli yabaseshi nedokhumentari, Kwakunobunye ubuntu (1977). Ngaphezu kwalokho, unochungechunge lwethelevishini, Iplanethi ethandekayo, ehlelwe ngeziqephu eziyishumi nantathu ezisakazwa phakathi kuka-2003 no-2004. Ngamanye amagama, uBenítez akanamkhawulo lapho exoxa izindaba futhi ezwakalisa ukukhathazeka.
Uhlu lwamanoveli kaJJ Benítez
Ukuhlubuka kukaLucifer (1985)
UPhapha Obomvu (Inkazimulo yesihlahla Somnqumo(1992)
Usuku lombani (2013)
Inhlekelele Enkulu Ephuzi (2020).
Ngokunikezwa uhlobo lomsebenzi wokuphenya owenziwa nguJJ Benítez, cishe akunakugwenywa ukuthi bekungeke kube khona indawo yokugxeka nokuphikisana ngemuva kweminyaka ecishe ibe yingxenye yekhulu lomsebenzi. Phakathi kwezinsolo ezibaluleke kakhulu yilezo okuthandwa ngumlobi ngokubeka umuzwa wakhe kude nobunzima besayensi, okuyinto ayibona ingenakugwenywa.
Ngalo mqondo, umbhali weNavarrese ukusho lokho inika inani lemizwa nemvelo njengengxenye eyisisekelo yomuntu. Ubesolwa nangokukopela Incwadi ye-Urantia. Eqinisweni, leli cala lalingenasisekelo somthetho, ngakho-ke, uBenítez wenza isimangalo esiphikisayo (asinqobile). Kumele kuqashelwe ukuthi umbhalo okukhulunywa ngawo ubusezandleni zomphakathi kusukela ngo-1983.
UJJ Benítez namuhla
UJuan José Benítez ukubeke kwacaca ezingxoxweni zakamuva ezahlukahlukene ukuthi iyaqhubeka nokwenza ucwaningo nokubhala amaphrojekthi ezinhlobo ezahlukahlukene kakhulu. Kangangokuthi, ohlelweni lwethelevishini lwe Abayisikhombisa (2020) uthe "Nginamaphrojekthi ayi-140, ngiyazi ukuthi ngeke ngiwafeze." Yinye into eqinisekile, uzoqhubeka nokushicilela lapho ethanda, ngoba enye yemishwana yakhe eyisithonjana yile:
"Angibhali ukujabulisa noma ngubani."
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi zikaJJ Benítez